लुटेरा ग्याङको कम्बिनेसन : विप्लव नेताको योजना, पूर्वसैनिक र सशस्त्र प्रहरीको ‘कभर’
8th September 2019, 04:39 pm | २२ भदौ २०७६
काठमाडौं : योगेशका बुवा गंगालाल अस्पतालको शैयामा छटपटाइ रहेका थिए। बुवाको उपचारको लागि नवलपरासी बर्दघाटका बालकृष्ण सुनचाँदी पसल सञ्चालन गर्दै आएका योगेश विक भने गत बिहीवार अर्कै धन्दामा थिए।
बुवालाई अस्पतालमा कुरेर बसेका विकको मोबाइलमा पटक पटक फोन आएपछि बिरामी बुवा छोडेर उनी सामाखुसी बसपार्कतिर लागे। सुन व्यवसायी उनलाई कसैले सस्तोमा एक किलो सुन मिलेको भन्दै बोलाएका थिए।
बसपार्कमा रहेको मुस्ताङ होटेलको कोठा नम्वर ४०४। त्यहीं उनीहरुबीच सस्तोमा सुनको कारोबार हुँदै थियो। तर एक्कासी होटेलमा पुगेका एक जनाले पेस्तोल निकाल्दै विकको टाउकोमा ताकेपछि उनको हंशले ठाँउ छोड्यो। सस्तो सुनले उनको ज्यानै खतरामा पर्‍यो। सुन किन्न आएका विकको साथमा रहेको रकम लिएर लुटेरा ग्याङ निस्कियो। विकको पैसा पनि फुत्कियो सुन पनि हात लागेन।
त्यसपछि प्रहरीकै सहारा। उनी उजुरी लिएर प्रहरीकहाँ पुगे। उजुरीको आधारमा प्रहरी शनिवार लुटेरा ग्याङलाई नियन्त्रणमा लिन सफल भयो। नुवाकोट तार्केश्वर गाउँपालिका घर भएका रामबहादुर तामाङ, कुशल अधिकारी, धर्मराज तामाङ, युवराज भण्डारी, योर्साङ घले, विजय तामाङ, पिटर तामाङ र राजन तामाङलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। ‘उजुरीपछि विभिन्न तरिका अपनाएर खोजी गर्दा उनीहरुलाई अर्को लुटको योजना बुनिरहेको अवस्थामा नियन्त्रणमा लिएका हौं,‘ महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका डिएसपी होबिन्द्र बोगटीले भने।
प्रहरीले उनीहरुलाई हाई रेस्टुरेन्ट एन्ड बरबाट नियन्त्रणमा लिएको थियो। पक्राउ परेकामध्ये रामबहादुर, धर्मराज, कुशल, विजय र पिटर तामाङ भने रेस्टुरेन्टका सञ्चालक समेत हुन्। ‘उनीहरुको बाहिरी आवरण रेस्टुरेन्ट व्यापार हो। तर भित्री लुटपाट नै भएको देखियो,‘ डिएसपी बोगटीले भने।
भगौडा सेना, सशस्त्र प्रहरी र विप्लव समूहको लुटेरा ग्याङ
प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएका उनीहरुले यसअघि पनि विभिन्न ठाउँमा लुटपाट गरेको देखिएको छ। उनीहरुले आइतवारदेखि मंगलवारसम्म बौद्धस्थित एउटा घरमा लुटको योजना बनाएको पनि खुलेको छ। ‘हामीले नियन्त्रणमा नलिएको भए बौद्धको एक घर लुट्ने योजना थियो। त्यसका लागि उनीहरुले सम्पूर्ण योजना बुनिसकेका थिए,‘ डिएसपी बोगटीले भने।
लुटेरा ग्याङको मुख्य योजनाकार रसुवा छेदिङ्कमो गाउँपालिका वडा नम्बर ४ घर भएका २९ वर्षीय योर्साङ घले भएको प्रहरीको अनुसन्धानमा देखिएको छ। घले सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको नेत्रविक्रम चन्द 'विप्लव' नेतृत्वको प्रतिबन्धित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेतासमेत भएको प्रहरीको दाबी छ।
त्यस्तै प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेका गोरखा अजिरकोट गाउँपालिका घर भएका ३८ वर्षीय कुशल अधिकारी भने सेनाका भगौडा हुन्। सेनाको जागिर गर्दागर्दै भागेर लुटपाटमा संलग्न भएको खुलेको छ। गुल्मी इस्मा गाँउपालिका घर भएका ३० वर्षीय युवराज भण्डारी पनि सुरक्षाकर्मी नै हुन्। उनी सशस्त्र प्रहरीका जवान हुन्। ‘विप्लप नेताले योजना बनाउने त्यसमा उनीहरुले कभर दिने गरेको देखियो,‘ एक अनुसन्धान अधिकारीले भने।
प्रहरीकै हेयरस्टाइल अनि प्रहरीले नै बोक्ने पेस्तोल!
प्रहरीले उनीहरुको साथबाट दुई थान चाइनिज पेस्तोल र ४ राउन्ड गोलीसमेत बरामद गरेको छ। उनीहरुले पेस्तोल देखाएर नै लुट्ने गरेका थिए। उनीहरुको साथबाट बरामद भएको पेस्तोल हाल नेपाल प्रहरीले बोक्ने गुणस्तरको देखिएको छ। प्रहरीले उक्त पेस्तोल द्वन्द्वताका लुटिएको हुनसक्ने प्रहरीले आशंका गरेको छ। यद्यपि यसबारे थप अनुसन्धानपछि मात्र खुल्ने महानगरीय प्रहरी परिसरका एसपी अशोक सिंहले बताए। ‘यो हामीले नै बोक्ने खालको राम्रो गुणस्तरीय पेस्तोल हो। यो कहाँबाट आयो? प्रहरी कै हो कि होइन भन्ने अनुसन्धान गरिरहेका छौं,‘ एसपी सिंहले भने।
त्यस्तै उनीहरुले लुट्ने घरमा प्रहरी भन्दै प्रवेश गर्ने र लुटपाट गर्ने गरेको खुलेको हो। सबै जनाले प्रहरी जस्तै देखिने हेयरस्टाइल र हाउभाउ समेत गर्ने गरेका थिए। ‘सबै युवा छन्। हेयरस्टाइल पनि प्रहरीको जस्तै बनाएर प्रहरी हुँ भन्दै घर तथा होटलमा छिरेको देखिन्छ,‘ परिसरका डिएपी होबिन्द्र बोगटीले भने।
लुटेरा ग्याङको कम्बिनेसन : विप्लव नेताको योजना, पूर्वसैनिक र सशस्त्र प्रहरीको ‘कभर’ को लागी कुनै प्रतिक्रिया उपलब्ध छैन ।